Shwe Hpon Shein::Profile
Our Companay, Shwe Hpon Shein Co., Ltd isawaterproofing Specialist and general trading company.We have been in waterproofing business since 1994 and we have donealot of Hotels,Factories,Buildings,Offices and Houses. So we have enough experience for local (Myanmar) structure’s quality and weather condition for waterproofing system .So we can provide suitable product and treatment for your project needs. We are using famous and reputable brands of waterproofing products.etc,....... ELMITCH,coprox INTERNATIONAL,AXXONE INTERNATIONAL and SATKCMA s.a and many more. If you interest for your project,Please contact us.
* Enclosed our catalougues and project profile for your study.*
ရေလုံ၊ရေယိုစိမ့်မှု တားဆီးခြင်း (တဖက်ကမ်းခတ်ကျွမ်းကျင်သူများ)
မိမိတို့ ပိုင်ဆိုင်သော(သို့)ပတ်သက်နေသောအိမ်၊ ဟိုတယ် ၊မိုတယ်၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများနှင့် Constructionတို့တွင် ရေယို၊ရေစိမ့်၊ ရေပန်းထွက်နေမှုတို့ကိုပြုပြင်မရ၍ အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေခဲ့လျှင် ကျွန်တော်များရွှေဘုန်းရှိန်ကုမ္ပဏီလီမိတတ်မှ ထိုအခက်အခဲများကို ကျွမ်းကျင်သောဝါရင့်ပညာရှင်များက (Guarentee) နှစ်တိုနှစ်ရှည်တာဝန်ယူ၍ သင့်တင့်ချိုသာသော ဈေးနှုန်းများနှင့် ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
ကျွန်တော်များ ရွှေဘုန်းရှိန်ကုမ္ပဏီလီမိတတ် မှ ဆောင်ရွက်ပေးနေလျှက်ရှိသော(Waterproofing) ရေလုံရေယိုစိမ့်မှု တားဆီးသည့် လုပ်ငန်းများမှာ -
အိမ်အတွင်းအပြင်ရှိ ရေကန်တွင် ရေယိုစိမ့်ခြင်း၊ မျက်နှာကျက်နံရံတို့တွင် ရေငွေ့ပျံနေမှုကြောင့် အလှဆေးသုတ်ထားသည်နေရာများ အကျည်းတန် ရုပ်ဆိုးနေခြင်း၊ အိမ်၏ကြမ်းခင်းများမှ ရေယိုစိမ့်နေမှုများကို ကာကွယ် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
ဟိုတယ် ၊မိုတယ်နှင့်အခြားအဆောက်အဦးများ၏ ပြတင်းတံခါးများ၊ မှန်တံခါးဘောင်များနှင့် (Flat) အမိုးမျက်နှာပြင်များမှ မိုးတွင်းအခါ၌ ရေယိုစိမ့်ခြင်း ၊ ဓာတ်လှေကား အောက်ခြေအတွင်းမှရေစိမ့်ထွက်၊ ပန်းထွက်မှုများကို ကာကွယ်ပေးခြင်း၊
စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့် Construction တို့အတွင်းရှိ (Underground Tank) မြေအောက်ရေကန်များမှ ရေယိုစိမ့်ခြင်း၊ရေပန်းထွက်ခြင်း များကိုတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပြီး အခြားသောရေယိုစိမ့်မှု အားလုံးတို့ကိုလည်း တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ပတ်သက်သည့်နေရာများ၌ ရေယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပေါ်နေခဲ့လျှင် ShweHponShein Co., Ltd.(Ph.665774) သို့ဆက်သွယ် မေးမြန်း၍ အကြံဥာဏ်တောင်းခံနိုင်သည့်အပြင် ShweHponShein Co.,Ltd. တွင်ဝယ်ယူရရှိနိုင်သည် (WaterproofingMaterials) ရေလုံ ပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူ၍ မိမိတို့စိတ်ကြိုက်ပြုပြင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
Shwe Hpon Shein Co., Ltd. တွင် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်သည့် Waterproofing Products ရေလုံပစ္စည်းများမှာ-
Duraflex Polymer Elestomer Waterproofing (Liquid form high performance rubbrised) ရာဘာသုတ်ဆေး၊
Tile Grout - ကြွေပြား/ကျောက်ပြားများကြားတွင် ထည့်၍သုံးသောရေလုံဆေး
Cement Additive - ဘိလပ်မြေနှင့်ရော၍သုံးစွဲရသော
CoproxCobond- Coprox နှင့်တွဲသုံးနိုင်ခြင်း၊စပ်ဆက်မှုရှိစေပြီး၊စွဲကပ်အားကောင်းမွန်ခြင်း၊အဆောက်အဦးဟောင်းများကို Plaster အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ Coprox (Water Repellent) (Crystallization) ပေါင်ဒါမှုန့်၊
အထက်ပါ အမှတ်တံဆိပ် ပစ္စည်းများသည်
သုံးစွဲရာတွင် လွယ်ကူ၍အညွှန်း(Instruction) များဖတ်ရှုပြီး ကိုယ်တိုင် လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း၊
Heigh Performance Products များဖြစ်သည့် အတွက် ပစ္စည်းအရည်အသွေးအား နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းနှင့် အညီ ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွတ်ရာတွင် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ ယုံကြည်စိတ်ချလောက်သော လုပ်ငန်းပမာဏနှင့် အတွေ့အကြုံ ရှိကြောင်း Project Profile ဖြင့်လေ့လာနိုင်ပါသည်။